NYI LYNN SECK 18+ DEN: June 2008
Posted by NLS at 6/29/2008 07:24:00 PM0comments Links to this post
ဒီနေ့ ပျင်းပျင်း ရှိတာနဲ့ Search Engine Crawler တွေကို လျှောက်စမ်းနေရင်းက နည်းလမ်းလေးတစ်ခု သွားတွေ့တယ်။ Crawler တွေကို Proxy Tunnel တွေပုံစံနဲ့ သုံးတဲ့နည်း ဆိုပါတော့။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ဘလော့တွေကို ဘယ်လို ဝင်ရမလဲ မေးကြလွန်းလို့ ဖြေရတာလည်း မောလှပြီ။ ပရောက်ဆီ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေလည်း ပိတ်ထားတာဆိုတော့ ဘယ်ဟာ အသစ်တွေမှန်း မသိတော့ဘူး။ ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ သိပြီးသူတွေလည်း သိပြီးကြမှာပဲ။ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပေါ့။ ကျှောတဲ့ခွတဲ့ဟာတွေ ဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ အသစ်တွေ့တာလေးမို့ မျှဝေတဲ့ သဘောပါပဲ။ တွေ့ပုချိ :)
အဲဒီဝဘ်ဆိုဒ်ကို ရောက်ရင် ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ဆိုဒ်နာမည်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်။ ပြီးရင် Submit လုပ်လိုက်ပါ။ ခဏစောင့်ရင် Crawler ဆိုတဲ့ အတန်းမှာ အနီရောင်နဲ့ Click here to view the page ဆိုပြီး ပှေါလာလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ဘရောက်ဇာကို Popup နဲ့ Java Script run နိုင်အောင် ဖွင့်ထားပေးဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ မြန်လည်းမြန်တယ်၊ ကောင်းလည်းကောင်းတယ် ဆိုတော့ မကြာခင် ဒီဆိုဒ်လည်း ပိတ်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့။ တကယ့်ကို ပရောက်ဆီဆိုဒ် မဟုတ်ရပါဘူးခင်ဗျာ။ Crawler တွေအလုပ်လုပ်ပုံကို ပြတဲ့ ဆိုဒ်လေးမို့ ချမ်းသာပေးကြပါလို့။ (မမြင်ရအောင် လင့်(ခ်)လေးကို သေးထားဦးမှ)
Posted by NLS at 6/28/2008 09:48:00 PM0comments Links to this post
As all we know, most ebooks and papers are in Adobe's PDF fomat and it's quite difficult to find specific title on the net; unless you are notabit familiar with some search engine code. But now newly found that search engine isagood helping hand for those who wanna digg the PDF articles. Likewise you also can use following code as google search engine.
Posted by NLS at 6/27/2008 08:58:00 PM0comments Links to this post
Labels: Computer, How To, PDF
U.S. Army: Asian Studies Detachment
Ref: Document ID: MSR-032-08
Subject: Myanmar (Burma) Special Report
Nyi Lynn Seck,a29-year-old blogger and social activist from Rangoon who, along with four colleagues, formedamakeshift group which they called “Handy Myanmar Youths to reconstruct homes in the delta, said that to date they have built more than 100 houses, or what they call “budget huts,” for cyclone survivors in the Laputta area.
However, the activist complained that corrupt local officials were siphoning off many of their building materials and that their disaster management skills were inefficient.
“I was disappointed because some villages did not receive the materials we tried to supply,” Nyi Lynn Seck said. “Officials from the Ward and Village Peace and Development Council stole them. For example, they gave us proposals for 10 x12-foot huts, but they took materials and tools to build 15 x 30-foot houses,” he said.
An urgent concern is the high price and scarcity of materials and tools, Nyi Lynn Seck said, noting in his blog that they were having trouble finding wood to build “budget huts” in Laputta.
He said that another setback to aid distribution was the disorganized method the Burmese military government relied on. He said the authorities did not useacomputerized system for the logistics of the disaster management and that they only worked on paper, so much of the help was “delayed, forged and wasted.”
I've never ever told like that, perhaps they are thinking that I could be hanging myself! In that report, they cited that source was taken from Irrawaddy. I, we need to care on media that who is telling truth and who is telling right, who is cheering up and who is striking us down. Retrieving data on Network is not much difficult, hah! so from now on I'll track every false reports about us and will complain directly. We are helping Nargis Victims, but we dont wanna be being as Media Victims.
Posted by NLS at 6/26/2008 06:44:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 6/25/2008 08:47:00 PM0comments Links to this post
We have talked about this post and had solved the problem. RFA replied they didnt say like that and it could be misunderstanding between us. What our fault was posting directly unless listening their program, but by other says. We are abit sorry for using of some harsh tounge in that post for covering our side. We were so glad for hearing the appreciation and reflected voices of ppls from abroad about our activities but we had some experiences with some media for using us. So honestly, we afraid it. Let it be and let it pass. We havealong way to go on.
Previous Post was deleted by "NLS"
Posted by NLS at 6/24/2008 12:42:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်တှောတို့ အဖွဲ့ မနက်ဖြန်မှာ သုံးယောက် လပွတဿတာကို ပြန်သွားပါမယ်။ အဖျားမပြတ်သေးတဲ့ ယောသားနဲ့ ကိုမျက်လုံး ကျန်ခဲ့ပါဦးမယ်။ ကိုမျက်လုံးက မိသားစု ကိစဿစ တစ်ခုကြောင့် ခရီးတစ်ခု ခဏ သွားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြောင်း တစုံတရာ ရှိခဲ့ရင် ယောသားကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ပြန်လာတာ တှောတှောလေး ဖီးလ်ငုပ် သွားလို့ အားလုံး ပြန်လာကြတာပါ။ သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေသေးသလို အိမ်ငှားတာလည်း အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ သစ်လည်း ဝယ်လို့ မရသေးဘူး။ ဒါတွေကို သဘက်ခါမှာ အပြီး ရှင်းပါမယ်။ တကယ်လို့များ သရက်သား သစ် ဝယ်လို့မရရင် အင်ကညင် သုံးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပုသိမ် မြောင်းမြကနေ ယူရမလားဆိုတာ ဈေးနှုန်းတွေ စုံစမ်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လှေမရှိသေးတဲ့အတွက် သွားရေးလာရေးဟာ အရင်ကလိုပဲ ခက်ခဲဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇေကမဿဘာ ကုမဿပဏီက ပံ့ပိုးပေးတဲ့ လှေကြီးကလည်း ပင်လယ်ပြင်မှာ ဝေလငါး ထွက်ဖမ်းလို့ ရလောင်အောင် ကြီးနေတာမို့ ရေကျှော ချောင်းပေါက် ရွာတွေကို သွားမရပါဘူး။ ကျွန်တှောတို့က လူရှစ်ယောက်၊ လှေသမားက ၁ဝယောက်ပါတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူတို့အတွက်နဲ့တင် ဆင်ဖိုးထက် ချွန်းဖိုး ကြီးမှာကို မြင်နေတာကြောင့် ပြန်အပ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် ကျွန်တှောတို့ တဲဆောက်ရာမှာ ရွာသားတွေ စိတ်ပါလက်ပါ ဆောက်အောင် ဆုပေးတဲ့ နည်းဗျူဟာကို ကျင့်သုံးပါမယ်။ အိမ်တစ်လုံး ကျွန်တှောတို့ ပုံစံအတိုင်း သေသေသပ်သပ် ထွက်မယ်ဆိုရင် အလှူငွေ ငါးသောင်းကျပ် ထောက်ပံ့ပါမယ်။ သေသေသပ်သပ် မထွက်လာရင်တော့ ဒီထောက်ပံ့ငွေကို မပေးပါဘူး။ တချို့တွေကလည်း လက်သမား ငှားပြီး ဆောက်ပေးဖို့ အကြံပေးကြတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နေထိုင်စရိတ်ဟာ အဲဒီမှာ ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကို မရောက်သေး မနေဘူးသေးရင် သိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်သမား ၁ဝယောက်နေဖို့၊ စားဖို့၊ အိပ်ဖို့ ကျွန်တှောတို့ မတတ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီအထဲက တစ်ယောက် ရေထဲကျသေရင် နောက်နေ့ ထောင်ထဲ ကျွန်တှော ရောက်သွားနိုင်တယ်။ ဒီတော့ အခုနက စနစ်ကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးကြည့်ပါမယ်။
လပွတဿတာမှာ ကျွန်တှောတို့ကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ၀၉၈၆၀၁၄၁၈ ကို ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ်။ ဇေကမဿဘာက မေတဿတာပြုထားတဲ့ ဖုန်းပါ။ သတင်းမေးတာ၊ အင်တာဗျူး မေးတာတွေ မလုပ်ကြဖို့ မေတဿတာ ရပ်ခံပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ဟာ ဘာအနှောင်အဖွဲ့၊ တခြားဘာဦးတည်ချက်မှ မပါဘဲ ဒီဒုကဿခသည်တွေကို နေရေးထိုင်ရေး ခဏတာ အဆင်ပြေအောင် လိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူငွေတွေ လိုက်ကောက် မနေသလို ဘယ်အဖွဲ့ဆီကမှလည်း ပရိုပိုဆယ်တင်ပြီး တောင်းမနေပါဘူး။ လက်ရှိ အများသူငါ လှူဒါန်းတဲ့ ငွေတွေကို ထိရောက်မှုရှိအောင် အသုံးပြုပေးနေပါတယ်။ ဒိုနာတွေဘက်က ကျွန်တှောတို့ လုပ်နေတဲ့ ရလာဒ်လေးတွေကို ကြည့်ချင်တဲ့ ဆနဿဒကိုလည်း နားလည်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ဟာ ဒိုနာ အများကြီးနဲ့ တပြိုင်နက် လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်လေးကိုလည်း ပြန်လည် နားလည်ပေးစေချင်တယ်။ ဒီတစ်ခါ သွားရမှာ စိတ်လည်း လေးနေတယ်။ စိတ်မောလူမောလည်း ဖြစ်နေတယ်။ တမျိုးပဲ :(
Posted by NLS at 6/17/2008 09:55:00 PM0comments Links to this post
Labels: Diary, HMY, Nargis
Posted by NLS at 6/17/2008 05:29:00 PM0comments Links to this post
ဒါက ကျွန်တှောတို့ ရွှေကျွန်းသာ ကျောင်းစု ကျေးရွာမှာ ဆောက်လုပ်ပေးနေတဲ့ အိမ်တွေပါ။ စုစုပေါင်း ၂၅လုံး ရှိပါတယ်။ ထောက်ပံ့ ပစဿစည်းတွေ အားလုံး ချပေးပြီးပါပြီ။ နောက်ဆုံးအကြိမ် သွားရောက် စစ်ဆေးရာမှာ အားလုံး ပြီးစီးမှု မရှိသေးပါဘူး။ အနည်းငယ် ကျန်နေသေးတယ်။ တစ်ချို့ ရွာသားတွေကလည်း ပစဿစည်းရပြီးရင် အဲဒါတွေ နောက်ပို့ပြီး လယ်ထဲ ဆင်းနေတတ်ကြသေးတယ်။
Posted by NLS at 6/17/2008 05:25:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 6/15/2008 03:16:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 6/10/2008 09:42:00 PM0comments Links to this post